Ajuju - HANGZHOU LINAN HUASHENG DAILY NECESSITIES CO., LTD
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ bụghị onye na-ekesa ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa, yabụ ọnụahịa ga-adị ọnụ ala karịa ma zoo.
Ọbụna anyị bụ otu n'ime ndị na - ebu ngwa ahịa na akụrụngwa, yabụ anyị nwere ike ijikwa ogo na mbido mbụ yana ọnụahịa na - asọmpi.
Ee, anyị nwere MOQ chọrọ ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ihe ahaziri ma ọ bụ ngwugwu ahaziri.
Ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ ịzụta MOQ ngwugwu akpa ma ọ bụ igbe, mgbe ahụ, anyị na-eme ọtụtụ mbupu. anyị nwere ike ịchekwa efu ahaziri akpa ma ọ bụ igbe na anyị nkwakọba maka gị ọzọ iji.
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere Asambodo nke Si Malite; Insurance; MSDS, na akwụkwọ mbupụ ndị ọzọ ebe achọrọ.
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-25 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nnwapụta ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.
Nkwụnye ego 50% n'ọdịnihu, nguzo 50% megide otu B / L.